ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားနဲ့အတူမန်ယူတို့PSGကိုမရှုံးသင့်ဘဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ (ပွဲပြီးသုံးသတ်ချက်) – FBV SPORT NEWS
ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှား နဲ့ အတူ မန်ယူတို့ PSG ကို မရှုံးသင့်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့..(ပွဲပြီးသုံးသတ်ချက်)
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ အို့ထရက်ဖို့ကွင်းမှာ PSG အားချန်ပီယံလိဂ်အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်အဖြစ်လက်ခံကစားခဲ့ပါတယ်….
မန်ယူအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှာ ရတ်ဖို့ ကာဗာနီ မာရှယ် ဘရူနို တို့နဲ့အတူ ကွင်းလယ်မှာ ဖရက် တောမီနေး နောက်တန်းမှာ လင်ဒီလော့ မက်ကွိုင်းယား ဝက်ဆာကာ အဲလက်စ်တဲ့တို့နဲ့အတူ စုံလင်စွာပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်….
ပထမပိုင်းစပြီး ၆ မိနစ်မှာ PSG ဘက်က နေမာသွင်းဂိုးဖြင့် ၁ဂိုးစရခဲ့ပြီး ရတ်ဖို့ကချေပဂိုးပြန်လည်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်…..ပထမပိုင်းမှာ မန်ယူတိုက်စစ်ပိုင်း အေးနေခဲ့ပြီး PSG ဘက်မှာ ဖိအားပေးကစားနေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်….
ဒုတိယပိုင်းမှာ ပွဲဟာ မန်ယူဘက်မှ တိုက်စစ်ဆင်မှုများဟာ PSG နောက်တန်းကို တောက်လျောက် ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်….ကာဗာနီ ဘရူနီု ရတ်ဖို့စ် တိုက်စစ်တွဲလုံးတွေဖန်တီးမှုတွေကို မာရှယ်ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့လို့ပါဘဲ…မာရှယ်သာအဆုံးသတ်သေချာမယ်ဆို နှစ်ကြိမ်တောင်အပိုင်သေချာမယ့်ဂိုးတွေပါ….
ဒုတိယပိုင်း ဒိုင်လူကြီးနဲ့ အတူ UEFA ရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့် ဖရက်ကတော့ နှစ်ဝါတနီနဲ့ ထုတ်ခံလိုက်ရပြီး မန်ယူအသင်းဟာ တယောက်လျော့နဲ့ ဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်..PSG ဘက် နှစ်ဂိုးဆက်သွင်းပြီး မန်ယူနောက်တန်း အားနည်းချက်တချို့ကိုလည်း ဒီပွဲမှာ အများဆုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်…
ပွဲတွှင် မန်ယူအသင်းဟာတိုက်စစ်ပိုင်း ဟာ တိုးတက်လာပေမယ့် နောက်တန်းမှာ ထောင့်ကန်ဘောတွေ ဖြတ်တင်ဘောတွေမှာ လူကပ်တာ အားနည်းချက်များစွာရှိနေခဲ့ပြီး မရှုံးသင့်ဘဲရှုံးခဲ့ရပါတယ်…